I-Coronavirus kunye nesifo sentliziyo: I-COVID-19 iyichaphazela njani intliziyo yakho? - Imfundo Yezempilo | Eyenkanga 2021
Uluntu, Impilo Ekuhlaleni Imfundo Yezempilo, Impilo Ukuzonwabisa Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Inkampani, Ulwazi Lweziyobisi Inkampani, Imfundo Yezempilo Inkampani Iziyobisi Vs. Umhlobo Uluntu, Inkampani Inkampani, Ukuphuma Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi Imidlalo Impilo
Eyona >> Imfundo Yezempilo >> Yonke into ekufuneka uyazi nge-COVID-19 kunye nentliziyo yakho
Yonke into ekufuneka uyazi nge-COVID-19 kunye nentliziyo yakho
Phantse unyaka ukusukela oko kwaqhambuka inoveli coronavirus eU.S., kwaye ababoneleli ngezempilo ngoku bafunda ngakumbi malunga iziphumo ezingapheliyo ze-COVID-19 -Kuquka nentliziyo yakho. Sisifo sokuphefumla esichaphazela iindawo ezahlukeneyo zomzimba. Enye yazo yinkqubo yentliziyo. Zimbini izinto eziphambili ezixhalabisayo: indlela iingxaki ezikhoyo zentliziyo ezichaphazela ngayo umngcipheko wosulelo okanye iingxaki, nendlela intsholongwane eyonakalisa ngayo intliziyo yakho.
Ngaba iimeko zentliziyo zonyusa umngcipheko wosulelo nge-COVID-19?
Abantu abaneemeko zentliziyo esele zikho, ezinje ngesifo semithambo okanye isifo sesingqisho, abekho umngcipheko ophezulu wokusulelwa yi-coronavirus oko kubangela i-COVID-19, utsho UWilliam W. Li, MD ,UMongameli we-Angiogenesis Foundation, kunye nombhali we Yidla ukuBetha izifo . Oko kuthetha, awunakufane ubambe i-COVID-19 ngenxa yokuba unengxaki yentliziyo.
Kodwa ukuba bayagula emva kokosuleleka, imeko yentliziyo yabo inokunyusa umngcipheko wokufumana iingxaki ezinkulu kuzo zombini ezi zifo, utshilo uGqirha Li.
Ngaba abantu abaneemeko zentliziyo banomngcipheko ophezulu wokukhula kwimeko enzima ye-COVID-19?
Ewe. Ukuba bosulelekile, abo banezimo zentliziyo esele zibekhona-kubandakanya ukusilela kwentliziyo, isifo semithambo, okanye i-cardiomyopathies-banomngcipheko ophezulu wokugula kakhulu, ngokuka Amaziko e-U.S. OLawulo noKuthintela izifo (I-CDC). Oku kuchaphazela umzimba wakho ngeendlela ezintathu eziphambili.
Ukunciphisa ukuphendula komzimba: Ubukho besimo sentliziyo esisezantsi bunciphisa amandla omzimba okumelana noxinzelelo losulelo-sisongelo esisongelayo, utsho UAbisola Olulade, MD , Ugqirha wamayeza osapho eSharp Rees-Stealy Downtown eSan Diego. Abantu abaneemeko zentliziyo banokuba namanqanaba asezantsi eoksijini kunye nezihlunu zentliziyo ezibuthathaka. Banokuba nokunye ukufana nesifo seswekile, uxinzelelo lwegazi kunye nokutyeba kakhulu, okwonyusa umngcipheko weengxaki ezinzima kunye nokufa kwi-COVID-19.
Ukuncipha kokujikeleza: Intsholongwane ihlala kwiindlela zomoya kwaye ichaphazele imiphunga, apho iphazamisa umsebenzi ophambili wemiphunga: ukufumana ioksijini egazini, utshilo uGqirha Li. Xa amanqanaba eoksijini ehla nosulelo, oku kunokubangela umngcipheko weengxaki kubantu abaneemeko zentliziyo esele zikhona apho ioksijini esezantsi emzimbeni inokubeka uxinzelelo entliziyweni.
Umngcipheko owandayo weempawu ezihleliyo ( ngokulandelelana ): Izigulana ezineemeko zentliziyo ezisesichengeni zisengozini yokufumana iimpawu ze-COVID zexesha elide, ngokukaGqirha Olulade. Ngokusisiseko, ubukho bobukho be-coronavirus kunye nesifo sentliziyo kunokuba yingozi kwixesha elifutshane nelide.
Kutheni le nto i-COVID-19 isoyikisa abantu abanesifo sentliziyo?
Isizathu sokuba abaguli abaneemeko zentliziyo ezingaphantsi bajongane nokugula okunzima xa befumana i-COVID-19 kungenxa yokuba intsholongwane inefuthe elibi nakwiintliziyo zesigulo esasisempilweni ngaphambili.
Kuphononongo lwakutsha nje olupapashwe kwi- Inzululwazi yeJAMA , Oogqirha bahlalutya izidumbu ezenziwa kwizigulana ezingama-39 ze-COVID-19 kwaye bachonga usulelo ezintliziyweni zezigulana ezazingafumaniswanga ukuba zinengxaki yemithambo yentliziyo ngelixa zigula, utshilo uJaveed Siddiqui MD, MPH, igosa lezonyango eliyintloko Umnxeba2U .
Olunye uphando lupapashwe kwi Inzululwazi yeJAMA ifumanise ukuba, ii-Cardiac MRIs kubantu abali-100 abaye baphola kwi-COVID-19 kwiinyanga ezimbini ukuya kwezintathu ezidlulileyo babonisa ukubandakanyeka kwentliziyo kwi-78% yezigulana kunye nokuqhubeka kokudumba kwezihlunu zentliziyo kwi-60% yezigulana, ucacisa uGqirha Olulade.
Ngelixa ezinye izifundo zifuna ukwenziwa, kubonakala ngathi i-COVID-19 inokubangela ukudumba kwentliziyo okungapheliyo kunye nemicimbi yentliziyo kwizigulana ezazingazange zifumane naziphi na izifo ezinxulumene nentliziyo.
Ngaba i-COVID-19 ingayonakalisa intliziyo?
Ngelixa okuninzi kungaziwa ngokubaluleka kwexesha elide kweengxaki ze-COVID-19, kunokubangela ukudumba kwentliziyo yemisipha (myocarditis), ngokwe i-CDC . Oku kubangela ukungakwazi kwentliziyo ukupompa ioksijini kuwo wonke umzimba, nokungaqheleki kwisingqi sentliziyo (arrhythmia), ngokukaGqr. Olulade.
Wazi njani ukuba i-COVID-19 iyichaphazela intliziyo yakho?
Kwimeko yokonzakala kwentliziyo ye-coronavirus, unokuzibona ezi mpawu zilandelayo, ngokukaGqr. Li, Siiddiqui, kunye neOlulade:
Iipilpitations zentliziyo (aka arrhythmia), eziva ngathi ukubetha, ukugijima, okanye ukubetha kwentliziyo
Ukuphefumla kancinci, ngakumbi xa ulele phantsi
Ukuba nesiyezi, ukuba nentloko elula, okanye ukuziva utyhafile
Ukugcina ulwelo emaqatheni
Oku kunokuba sisiphumo se-myocarditis ebangelwe lusulelo lwangaphambili lwe-COVID-19, okanye ukunciphisa ioksijini ukusuka kusulelo lwangoku lwe-COVID-19.
Ungahlala njani usempilweni
Njengoko ubhubhane we-COVID-19 uqhubeka, kubalulekile ukuba wonke umntu aqhubeke nokukhathalela impilo yakhe yengqondo nengokwasemzimbeni. Ukuba usemngciphekweni wesifo sentliziyo, okanye uhlala nemeko yentliziyo esele ikho, kubaluleke ngakumbi ukuba uthathe la manyathelo alandelayo ngexesha lobhubhane.
Thintela usulelo: Nxiba imaski, umgama ekuhlaleni, kwaye uhlambe izandla zakho kakuhle kwaye rhoqo. Ukuphepha ukubamba intsholongwane lolona nyango lulungileyo.
Musa ukulinda ukubona umboneleli wakho wezempilo: Izigulana ezininzi zoyike ukufuna ukhathalelo lweemeko zazo eziqhubekayo ezinokuthi zikhokelele kwiziphumo eziyingozi, utshilo uGqirha Olulade. Khumbula ukuba ukongeza ekunxibeni imaski, ukudana ekuhlaleni, kunye nokuhlamba izandla, ukukhathalela imeko esele ikho yenye yezona zinto zibalaseleyo onokuzenzela impilo yakho.Ingcebiso efanayo iyasebenza ukuba uqala ukuba neempawu. Ukuyekisa utyelelo kwandisa umngcipheko wemeko embi ngakumbi emgceni.
Gcina indlela yokuphila esempilweni: Ukusukela oko i-COVID-19 yaqala ukusasazeka kwi-US iphela, ukusela utywala kunjalo inyuke nge-14% . Abantu abadala banjalo ukutya ama-31% Kaninzi. Ngexesha elifanayo umsebenzi womzimba yehlile ngama-32.3% . Ngaphezulu koko, abantu bafumana amaxhala angazange abonwe ngaphambili. Zonke ezi zinto zimbi kwimpilo yentliziyo-kwaye oogqirha bakhathazekile kungakhokelela ekwandeni kwesifo sentliziyo emva kwesifo. Kubalulekile ukuba uhlale usebenza, utye ukutya okunesifo sentliziyo, kwaye ujonge impilo yengqondo ukuba usengozini, okanye sele unentliziyo.
Ezinxulumene: Uqala njani (kwaye unamathela) kwintliziyo yokutya okusempilweni
Lawula iingxaki zentliziyo yakho: Ukulawula iimeko zentliziyo yakho kwandisa amathuba okusinda kusulelo lwe-coronavirus, uGqirha Olulade ucebisa. Thatha amayeza akho njengoko kumiselwe, gcina ubunzima obusempilweni, uzilolonge, kwaye ulale ngokwaneleyo. Nciphisa ukuselwa kotywala, kwaye uphephe ukutshaya nokuphefumla. Kuya kufuneka utye ukutya okunesifo sentliziyo okugcwele ukutya okusekwe kwizityalo, ifayibha kunye nokutya kwaselwandle. Gwema ukutya okucutshungulwayo kunye nokutya okuneswekile eninzi. Zama ukusebenzisa izinto ezilungele ukukhuselwa komzimba wakho, inkqubo ye-vascular, kunye nempilo yentliziyo.
Gonyo: Xa ifayile ye- Isitofu se-covid-19 iyafumaneka kuwe, yenza idinga lokuyifumana. Okwangoku, qiniseka ukuba ezinye izitofu zigonyiwe zihlaziyiwe, njengokugonya komkhuhlane okanye ukugonya. Yazi nje ukuba ugonyo oluthile lufuna ixesha lokulinda ngaphambi kokuba ufumane i-COVID-19.
ZIQHELEKILEYO: Yintoni onokuyilindela emva kogonyo lwe-COVID-19
Xa ungathandabuzeki, tsalela umnikezeli wakho wezempilo. Iiofisi ezininzi zibonelela ngokuqeshwa kweze-telehealth ukuphendula imibuzo malunga nesicwangciso sakho sonyango, okanye eyona ndlela yokulawula i-coronavirus kunye neempawu zesifo sentliziyo.
Yeyiphi i-naloxone formulation ekufuneka uyifumene?
Ngaba ndingasela utywala ngelixa ndithatha iMetformin?
amanqanaba eswekile egazini kuhlobo lweswekile 2
ukwenza umthambo ngoxinzelelo lwegazi kukhuselekile
Inqanaba lam leswekile kufuneka libe yintoni emva kwesidlo
Chwetheza 1 iswekile egazini amanqanaba eswekile yegazi
Ndisebenzisa ntoni kusulelo lwegwele
Ngaba amayeza ahlawulela umkhuhlane kwikhemesti
ukuba awuyinyamezeli i-lactose kwenzeka ntoni